अतृप्त सपना - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
अतृप्त सपना - टंक कार्की
मेरो वालमा कहाँबाट कसैको पोस्ट आयो । सुरुका एकाध हरफ पढ्दा मलाई लाग्यो यो कुनै अतृप्त आत्माको नालीबेली हो । अझ पढ्दै गएँ, यो कुनै नेताको घोषणापत्र हो । पढ्दै गएँ झन् चाखलाग्दो छ । अनि सोचें, मै मात्र किन पढौं, तपाईहरू नै अर्थ्याउनो’स् । अरू कसैलाई काम लाग्ला कि ?! यो ठानेर पनि तपाईंहरूमाझ बाँडेको छु, जस्ताको तस्तै –
‘मैले हिजो राति सपना देखें । त्यसो त म मंगेरी लाल भने होइन । जब बिउँझें, झसंग भएँ । होइन, कस्तो सपना देख्न पुगेछु ?! कसैको सपना चिप्लेर म कहाँ आएको त होईन ?! फेरि म मफ्फत लाल कहाँ हो र ?! चिन्तनमै भौतिकवादी अनि द्वन्द्ववादी । मनलाई सम्हालें, भाइ, यसलाई जतन गरेर राख्नु पर्छ । आँखा मिच्दै र कचेरा पुछ्दै म सपना लिपिबद्ध गर्न थालें ।’
मेरो पार्टीले संसदीय चुनावमा भारी बहुमत ल्याएर म भर्खरै प्रधानमन्त्री चुनिएको थिएँ । सानो मन्त्रिमण्डल थियो, चुस्त दुरुस्त । ऊर्जावान् पनि थिए पाका पनि । थिए त सबका सब निष्कलंक, निर्दाग । यो लर्तरो बरदान होइन । इतिहासको उपादान । पहिलो क्याबिनेटको बैठक । मैले भने– हामी थोरै समयलाई यहाँ छौं । तर, थोरै गर्ने विलासिता हामीलाई उपलब्ध छैन । हामी धेरै गर्न न सकौंला पनि । म एक दुईटा कुरामा तपाईहरूको साथ चाहन्छु ।
१. हामीले अघि राष्ट्रका सामु जे कसम खाएका छौं त्यसमा तपार्इंहरू मलाई निगरानी राख्नोस्, म तपाईंहरूलाई । नकारात्मक सूचीमा काम गरेको पाइए जोकोही पनि पाता कसिन तयार हुनुपर्दछ । तपाई हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ, छुनुमुनु गर्दै मेनका विश्वामित्रका अघि आएर ध्यान भंग गरेकी थिइन । विश्वामित्रले गरेको गल्ती गर्न हामीलाई छुट छैन । तपाई हामीलाई सुदूर शास्त्रका पात्र होइन, निकट अतितका इतिहासका मनमोहन र किसुनजीबाट पनि सिक्नलाई धेरै कुरा छन् । यहीँनेर हामीले बिनाकरकाप सकारेको कबुललाई ख्याल गर्नेछौं कि हाम्रो न्याय विधानमा कसै प्रति मुलाहिजा हुनेछैन । हामी माथिदेखि नै चुहिने नाली टाल्नेछौं ।
२. देश त्यसै बन्दैन । तपाई हामीहरू यहाँ सुविधा कुम्ल्याउन आएका होइनौं । भन्नलाई हामी सबैले बाहिर दुनियाँदारलाई सेवा गर्ने भनेरै आएका हौं । हामी समाजका अलिक पुगिसरी भएकै मानिस हौं । त्यसो भए हामी जति सक्छौं पेटारी कसेर सुरु गरौं । गान्धीले धोती लाएर पु¥याए, माओले हरियो ज्याकेट । हेर त अहिले पनि सोनिया गान्धी खाडीको साडीमा सार्वजनिक हुन्छिन् । सिंगै चीनले ३०औं वर्ष माओको फारुतिनुमा आफूलाई धान्यो । गरिबलेपाई पाई जम्मा गरेर पुँजी निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्दछ, हामीले महाराज महारानीको सिको गर्ने होइन ।
३. हामीले अख्तियार गरेको जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नो निजी सनक होइन, राष्ट्रको संकल्प हाम्रो विश्वासमा छोडिएको मात्रै हो । यसैले सनक होइन हाम्रा काममा राष्ट्रिय संकल्प, फेरि पनि म दोहो¥याउँछु निजी सनक होइन, राष्ट्रिय संकल्प मुखरित हुनुपर्दछ । योजना र नीति बनाउने मूल थलो यहीँ हो । अँध्यारो कोठामा हामीलाई बस्नु छैन, एक्लैदुक्लै खासखुस पनि गर्नुछैन ।
४. हाम्रा आफन्तहरू छन्, तर यो ठाउँमा हाम्रा आफन्त भनेको गुणवत्ता नै हो । विश्वासका भरमा कोही लाखा पाखा हुने छैन, क्षमताअनुसार सबै हकदार हुने छन् । व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता र ऊर्जाको भरपुर सदुपयोग गर्ने छौं । हामी पाका र अशक्तहरूको हेरविचार गर्नेछौं । लालाबालालाई जतनका साथा हुर्काउनेछौं, सुशील हुन सिकाउनेछौं र शिक्षादीक्षा दिनेछौं । शान्तिका आदर्शमा सिंगै समाज विकसित गर्न कोसिस गर्नेछौं, त्यसका निम्ति विभेद र असमानता उत्सर्जन गर्ने सामाजिक आधार उखेल्ने छौं । हामीबाट मानवीय मर्यादामा कतैबाट खोट आउने काम हुनेछैन । अनि भने कसैले भन्ने छैन, यो सतीले सरापेको देश हो ।
५. हाम्रा सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा राजषी घरानाको श्रीवृद्धिमा होइन झुपडीको पुकार सम्बोधन गर्नमा निर्देशित हुनेछन् । उनको खुसबहाली र समृद्धि नै हाम्रो सपना विपना हो । छुट्टै अरू कुनै होइन । हामीलाई थाहा छ, कसौंडीमा यथेष्ट चामल नहाले अघाउँजी खान पाइदैन । फेरि, परिपन्चिसले बाढ्न पनि चुक्नुहुन्न ।
६. हामी हाम्रो स्वाभिमान र हित प्रति सदा संवेदनशील हुनुपर्दछ । त्यसो गरी रहँदा हामीले हाम्रो औकात र हैशियत पनि विर्सनु हुँदैन । छुच्चो पनि बन्नुहुँदैन । तित्राको मुखै बैरी पनि हामीले गर्नुहुँदैन । हीनाताबोधी पनि हुनु जरुरी छैन । आत्म सम्मान हुनेलाई मात्र अरूले पनि सम्मान गर्दछन् । हामी हुँदै न भएका होइनौं, हामीसंग पारस्परिक लाभमा मिलेर काम गर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन् र योगदान पनि गरेका छौं ।
६. हामी सामाजिक र भौगोलिक विविधता भएका समाज हौं, हाम्रो मिलिजुली बसोबास छ । हामीले भर्ने कार्चोपिमा ती रंग भर्न र हामीले उन्ने मालामा ती फूल उन्न कुनै कसरत बाँकी राख्नेछैनौं । बीपीले प्रजातन्त्र स्थापना भए आफू होइन परशुनारायण चौधरी प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेको मैले सम्झेको छु । आगामी २५ वर्षभित्र चेपाङ, राउटे, मुसहरजस्ता जातिका मानिस पनि यो क्याबिनेटका उत्तिकै सक्षम सदस्य हुने गरी योजनाका साथ हामी काम गर्नेछौं ।
७. हामी उन्मादी हुनेछैनौं । विपक्षमा साथीहरू छन् । हामी उनीहरूलाई भ्याकुरा खेदेझैं खेद्नेछैनौं । रचनात्मक सहयोगका निम्ति हामी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछौं ।
८. यस गुरुत्तर दायित्वको भवितव्य हाम्रै पाखुरामा छ र हाम्रो एकतामा छ । बीपीले सुवर्णको साथ लिए, राजनीतिबाट सन्यास लिएका सूर्यप्रसादलाई घिसार्दै गृहमन्त्री बनाए । जाँदाजाँदै पार्टी कुनै एउटा व्यक्तिलाई, आफ्नै भाइलाई मात्र नभएर सामूहिक नेतृत्वमा छोडेर गए । हाम्रा वरिपरिको निकट अतीतको यो इतिहासलाई हामी पूराका पूरा हेक्का राख्नेछौं ।’
‘हामी आफ्नो कार्यकाल सकिएर कुर्सीबाट निस्किँदै गर्दा चौकीदारले आएर हामीलाई तपाईंहरूले जेजति सक्नुभो राम्रो गर्नु भो !’ भनेर भनेछ भने अनि मात्र हामीले ठाने हुन्छ, हामीले इतिहासले हामीलाई सुम्पेको दायित्वको अनादर होइन, सम्मानै गरे छौं ।’ ‘अन्त्यमा, हामी न बिर्सौं, हामी त्यस्ता नाबिक हौं, हाम्रो थोरै मात्र लापर्बाहीमा, हाम्रो अलिकति मात्र बेहोसीमा हाम्रो जहाज डुब्ने छ । हामी त डुब्नेछौं, अरूलाई पनि डुबाउनेछौं । हामीबीच महासागरमा छौं ।’
जसै पढिसकें, एकछिन घोत्लिएँ, कत्रो अठोट ?! कसका होलान, यी अतृप्त सपना ?! जोसुकैका हुन, यी युटोपिया होइनन्, फुटानी त झन् हुँदै होइनन् । इमान र संकल्प भए दुसाध्य होइनन् पनि ।